Niteraka adihevitra be teo amin’ny samy mpandala ny nentin-drazana ny fotoana hanamarihana ny Taom-baovao Malagasy eto amintsika, tao ho ao. 22 septembre 2020
Mandray ny andraikiny amin’ny fandravonana izany ny minisitera misahana ny serasera sy ny kolontsaina ankehitriny ary hivoaka tsy ho ela ny tsoa-kevitra iraisana.
Ho voarindra atsy ho atsy ny fotoana hanamarihana miaraka ny vanim-potoana iraisana amin’ny taom-baovao iraisan’ny Malagasy.
Nampahafantarin’ny tale jeneralin’ny kolontsaina, Razafiarison Francis, nandritra ny fotoam-pankalazana io vaninandro io izay notontosain’ny fikambanana
« Malagasy mandala fihavanana », MAMAFI, teny Ambohijanahary, ny faran’ny herinandro teo ny vaovao. « Tapaka tamin’ny fikaonan-doha niarahan’ny fikambanana ara-drazana maro avy amin’ny lafivalon’ny Nosy tamin’ny taona 2016 ity fankalazana iraisana amin’ny tsinam-bolana amin’ny volana septambra ity mba ho fampiraisana ny Malagasy saingy tsy maintsy naverina indray ny fakan-kevitra, amin’izao fotoana izao, noho ny fitsipahan’ny sasany tamin’ireo mpivory io fifanarahana io taty aoriana », hoy izy. Nomarihiny fa ny tapaky ny raiamandreny ara-drazana sy ireo fikambanana mpiaraka aminy ihany no hankatoavina, hialana amin’ny mizàna tsindriana ila.